My faịlụ dị n'ofe mgbake. Gịnị bụ ihe ikpeazụ m ga-eme? - DataNumen
Ọ bụrụ na faịlụ gị jupụtara na efu niile mgbe ị na-eji ya usoro a inyocha ya, mgbe ahụ na e nweghị ndị na recoverable data na gị faịlụ. Agbanyeghị, atụla ụjọ. A ka nwere Ohere iji weghachite data gị, dị ka ndị a:
The disk / mbanye ebe faịlụ gị dị nwere ike ịnwe ụfọdụ data nwere ike iweghachite. Maka ụfọdụ ụdị data, dị ka Outlook ma ọ bụ Outlook Express data, i nwere ike iji DataNumen Outlook Drive Recovery or DataNumen Outlook Express Drive Recovery ka i scanomi disk / mbanye na-agbake gị data site na ya. Maka ụdị data ndị ọzọ, dị ka SQL Server data nchekwa data, ị nwere ike ibu ụzọ mepụta onyonyo nke diski ma ọ bụ iji ụgbọala mbanye DataNumen Disk Image, jiri DataNumen SQL Recovery ka i scanomi oyiyi faịlụ na-agbake data n'ihi na ị.
Diski / mbanye ma ọ bụ nchekwa nchekwa ọ bụla i depụtaghachiri faịlụ gị na, ma ọ bụ faịlụ gị adịla n'oge gara aga, nwekwara ike ịnwe data ịchọrọ. I nwekwara ike iji usoro yiri nke a na ngwọta 1 iji weghachite data gị.
I nwekwara ike kpọtụrụ anyị ma kọwaa usoro niile nke ọdachi data gị n'ụzọ zuru ezu. Anyị ga-enyocha aka gị nke ọma iji aka gị mara ma ọ ka nwere ohere iji weghachite data na usoro ọ bụla na-abụghị ọdịnala.
enweghị mgbake, diski, oyiyi disk, drive, njedebe ikpeazụ
Emelitere na May 14, 2021
Olee otú lelee ma ọ bụrụ na m faịlụ bụ recoverable site onwe m?Achọrọ m atụmatụ adịghị na ngwaahịa gị. Ihe a ga-eme?